Geminids: maxay yihiin, sifooyinka, goorta iyo sida loo arko | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 07/06/2021 10:25 | Astronomy
Maanta waxaan ka hadli doonnaa mid ka mid ah Roobka Meteor oo aad u firfircoon isla markaana mudan in la arko. Waxay ku saabsan tahay dhaxan Geminids. Waa koox xiddigo ah oo umuuqda inay ka yimaadeen meel ka mid ah xiddigta Gemini, sidaas darteed magaceeda, waxayna muuqdaan bilowgii ilaa bartamihii Diseembar. Waxay leedahay ugu sarreysa oo dhacda 14-ka bishaas sannad kasta waana waqtiga aad daawan karto 100 ama ka badan meteor saacaddii.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato Geminids, astaamahooda iyo sida loo arko.
2 Asalka Geminids
3 Sharaxa Geminids
4 Goorma iyo sida loo ilaaliyo
Ilaa iyo inta xaaladaha cirka ay ku habboon yihiin, waxay leeyihiin aragti ku filan waana habeen aan dayax lahayn, waa la arki karaa in kabadan 100 meteors saacadii inta lagu gudajiray kacdoonkii Geminids. Tani waxay ka dhigeysaa qubeyska meteor ee ugu firfircoon ee maanta la arki karo. Algae-kan ayaa la mid ah kan afar geesoodka ah ee soo baxa bisha Janaayo.
Shucaaca daran ka sokow, xoogagga cuf isjiidadka ay qorraxdu soo bandhigto ayaa sidoo kale ku jabi kara lakabyada sare ee majaajiladaha ama xiddigiska. Haraadigu wuxuu kusii jeedaa wareegga oo wuxuu ku socdaa xawaare aad u dhakhso badan, oo marka Dhulku ku soo dhowaado ku filan, waxay galaan jawiga. Khilaafka ka dhashay taabashada gaasaska Hawada ayaa ionalaya iyaga, oo u muuqda iftiin iftiin ah oo jooga joogga sare, kuleylkuna wuxuu gebi ahaanba uumi baxayaa meteor-ka.
Jajabku marar dhif ah ayay ku dhacaan dhulka. Kiiskan, waxaa loogu yeeraa meteorites, markii ay wali ku sii socdaan wareega, waxaa loogu yeeraa meteoroids. Sidan oo kale, burburka ayaa loo kala saaraa, iyadoo kuxiran hadduu ka baxsan yahay jawiga ama gudaha jawiga, ama uu ugu dambeyn soo dego.
Geminids waa koox ka mid ah qubeyska meteor oo aan caadi aheyn asal ahaan asal ahaan oo aan ahayn jilid, laakiin asteriyoodh. Asteroodka waxaa loo yaqaan magaca Phaeton waxaana la helay 1983, ku dhowaad dhammaan maydhashada meteorku waxay ka kooban yihiin majaajillo, sidaa darteedna, Geminids waa marka laga reebo.
Cilmi-baarayaasha cilmiga xiddiguhu kuma raacsana nooca shaygan sababta oo ah waxay umuuqataa inay leedahay dabeecad isku dhafan asteriyoodh, inkasta oo indha indhayntu muujinayn koomaha Phaeton ee caadiga ah. Farqiga guud ee u dhexeeya hal jidh samaaleed iyo mid kale ayaa ah in majaajilladaha badanaa laga sameeyo baraf, halka astaamo-diimeedyadu waa inay noqdaan dhagaxyo.
Waxaa jira mala-awaal ah in Phaeton uu ahaa majaajiliiste 2000 sano ka hor, laakiin markii ay aad ugu dhowaatay qorraxda, culeyskeeda ayaa sababay musiibo weyn, wareegga ayaa si aad ah isu beddelay, isagoo ka tagay qashin fara badan, maanta waxaan ugu yeernaa Geminids.
Waxay u muuqataa in maydhashada Gemini ee meteor aysan markiiba muuqan dhacdadan ka dib, maxaa yeelay rikoodhkii ugu horreeyay ee muuqaalkoodu wuxuu dib ugu noqonayaa 1862. Dhinaca kale, maydhashada kale ee meteor, sida Diidmada iyo Leonids-ka laftoodu, waxay soo jireen qarniyo.
Xaqiiqdu waxay tahay in xitaa haddii qubayska meteor-ku uu la xiriiro burburka ay ka tageen astaamo-wadayaasha iyo majaajillada, had iyo jeer suurtagal maahan in la arko burburka ay ka tagtay habka ugu dambeeya sannad kasta.
Burburka soo saaray meteorite-ka sanadkaan waxaa laga yaabaa in la abuuray waqti hore isla markaana uu ku sii jiray wareegga ilaa iyo markaas. Laakiin waa inaan tixgelinno in meertadu aysan taagnayn, waxay isu beddelayaan isdhexgalka cufsiga iyo walxaha kale.
Geminids ayaa loogu magac daray maxaa yeelay waxay umuuqdaan inay ka yimaadeen meel ka mid ah xidigta Gemini ee loo yaqaan shucaaca. Tani waa uun saameyn aragti ah, maxaa yeelay waddooyinku waa is barbar socdaan waxayna u muuqdaan inay meel fog isugu tagayaan, sida waddooyinka tareenka. Laakiin waxay bixisaa hab loogu magac daro dhammaan maydhashada meteor weyn, sidaa darteed qubaysyadan saadaasha hawada waxaa loogu magac daray xiddigta meesha barta iftiimintu ku taal.
Roobku wuxuu bilaabmayaa inuu muuqdo qiyaastii Diseembar 4 wuxuuna soconayaa illaa 17, iyadoo ugu sarreysa dhaqdhaqaaqa agagaarka 13 ama 14. aragtida, oo ay ku jiraan cirka daruuro iyo dayax la'aan
Heerka zenith ee Roobka Geminid meteor waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya: 100-120 meteors saacaddii, taas oo muujineysa in jajabkii ay ka tageen Phaeton aysan wax badan kala firidhin ilaa iyo hadda. Intaas waxaa sii dheer, indha indheynta ayaa muujineysa in heerka zenith uu waxyar kordhay tan iyo markii roobka la helay.
Tirakoobka dadku wuxuu cabirayaa dhalaalka raadadka uu ka tagay kutlada meteor, iyo qubeyska Gemini meteor waa jaalle. Waxay kuxirantahay arrimo sida cufnaanta iyo xawaaraha meteor, waxaana matalaya r.
Qiimaheeda had iyo jeer waxaa loo dejiyaa 2, laakiin qaabka xisaabeed ee lagu hagaajiyay habdhaqanka Gemini, qiimaha waa r = 2.4, taas oo ah 2.6 inta lagu jiro muddada ugu badan ee waxqabadka. Iskiis ahaan, midabka jaallaha ah wuxuu muujinayaa jiritaanka macdanta birta iyo sodium ee halabuurka.
Goorma iyo sida loo ilaaliyo
Si loo ilaaliyo Geminids-ka waxaan tagi karnaa meelkasta oo meeraha ah. Waxaa laga arki karaa labada cirif, inkasta oo si muuqata looga arki karo dhanka woqooyi. Iftiimintu waxay bilaabmaysaa inay soo muuqato galabtii, halka koonfurta dhinaceeda ay tahay inaad sugto saqda dhexe. Sida xiddig kasta oo qubeys ah, sicirka meteor-ka saacad kastaa wuu kordhaa marka waqtiga la dhaafo oo dhalaalaa ayaa ka sarreeya cirka. Waqtiyada ugu wanaagsan ee la ilaaliyo maydhashada meteor ee u dhiganta Geminids waa inta lagu jiro subaxa hore ilaa qorrax ka soo baxa.
Inta lagu jiro maalinta roobku wuu socdaa, laakiin way ka sii dhib badan tahay in la qiimeeyo maaddaama xawaaraha jajabku aanu aad u dheereyn marka loo barbar dhigo maydhashada kale ee meteor. U fiirsashada ugu fiican Waxaa lagu sameeyaa iyada oo la doorto meel ka fog wasakhda iftiinka magaalada oo waxaan rajeyneynaa maalin uun in cirku aanu dayax ka jirin oo aan joogno meel wanaagsan. Meteors-ka ayaa la arki doonaa iyagoo aad u tiro badan oo leh socodka habeenka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto Geminids-ka iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Geminids
Waa maxay qorraxdu